सफलताका ९ सुत्रहरु जसलाई पालना गर्दा सफल हुने निश्चित छ - उज्यालो पाटो
सफलताका ९ सुत्रहरु जसलाई पालना गर्दा सफल हुने निश्चित छ
तपाई सफलतालाई केवल भाग्य वा लेखान्त वा दैवी कार्य सम्झिनु हुन्छ भने यो लेख तपाईका लागि उपयोगी नहुन सक्छ । यसमा लेखले सफलता भन्ने कुरा मानिसको सहि निर्णय, मिहिनेत, क्षमता, योजना, कार्यान्वयन लगायतका कुराहरुको प्रतिफल हो भन्ने कुराको वकालत गर्छ भने सफलतालाई भाग्यको खेल भन्ने सोचाइलाई निरुत्साहन गर्ने प्रयास गर्छ । यदि सफलतालाई भाग्य वा लेखान्त मान्ने हो भने कुनै पनि किसिमको परिश्रम वा लगावको त्यति ठुलो अर्थ लाग्दैन । यदि भाग्यमा सफलता छ भने जसरी नि मिल्छ र भाग्यमा लेखेको छैन भने कुनै हालतमा पनि पाइदैन भन्ने तर्क र विश्वासले मानिसलाई कर्म गर्नबाट विमुख गराउँछ । विमुख नगराए पनि निरुत्साहित भने पार्छ, पार्छ ।
यस्तै यो लेखमा सफलता भन्ने कुरा चिठ्ठा परे जस्तो आकस्मिक हुने वा चिठ्ठा पर्नु नै सफलता हो भन्न खोजिएको होइन । सफलता भन्नाले केवल पैसा कमाउँनु वा ठुलो पदमा पुग्नु मात्र पनि होइन । तर यसो भन्दैमा चिठ्ठा पर्नु, पैसा कमाउँनु वा ठुलो पदमा पुग्नु सफल हुनु होइन भन्न खोजिएको होइन तर सफलता मानक त्यतिमा मात्रै सिमित भने हुदैन । सफल हुनुको अर्थ योजना बन्नु, त्यसको कार्यान्वयन सम्पन्न हुनु र उद्देष्य प्राप्त हुनु चै हो ।
अत: मानिसको सहि निर्णय तथा व्यवहारहरु के कस्ता हुन्छन् ? मानिसले कस्ता सुत्रहरुको प्रयोग गरे सफल हुने निश्चित हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी यहाँ पाउँन सकिन्छ । यहाँ भएका सुत्रहरुको व्यवहारिक प्रयोग गर्दा आजको भोली नै जादु वा चिठ्ठा परे जस्तो सफल हुने भने होइन तर निरन्तर प्रयोग र अभ्यासले सफलता भने दिलाएरै छोड्छ । कृपया ! लेख पुरा पढ्नुहोला । मन परे आफ्नो सोसल एकाउन्टमा सेयर गरिदिनुहोला ।
नियम १ : अरुसँगै शान्तसँग बढ्नुहोस्
सफलता पाउँनुको सबै भन्दा पहिलो शर्त हो, अरुसँगको सम्बन्ध । कुनै पनि मान्छेले आफ्नो क्षमता वा पौरखमा गौरव गर्न सक्छ तर आधुनिक समाज यस्तो जेलिएको र जटिल छ कि केवल एकजना मानिसको प्रयासले मात्रै सफल हुन असाध्यै गाह्रो हुन्छ । यसैले सफल हुनका लागि सबै भन्दा पहिले अरुको क्षमतालाई सम्मान गर्ने र अरुसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनु पर्छ ।
यसका लागि तपाईले अरुलाई पनि साथ सहयोग दिनुहोस् र अरुसँग पनि साथ सहयोग माग्न नहिच्किचाउँनुहोस् तर आफ्नो परिश्रम वा सोच वा सहयोग वा सम्बन्धका बारेमा भने बढि हल्ला खल्ला नगर्नुहोस् । भनाई नै छ नि परिश्रम यति शान्तसँग गर्नुहोस् कि नतिजाले हल्ला गरोस् ।
नियम २ : आत्मविश्वास र दृढतापुर्वक चल्नुहोस्
एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, तपाई त्यति नै गर्न सक्नु हुन्छ, जति तपाई आफुले गर्न सक्छु भन्ने सम्झिनु हुन्छ । कुनै फरक सन्दर्भमा वा अपवादमा कहिलैकाँही सोच्दै नसोचेको क्षमताको काम पनि गरिएको हुन सक्छ तर सफलता त्यसरी प्राप्त हुदैन । आफुलाई विश्वास गर्ने र आफ्नो विश्वासमा अडिक भएर अगाडी बढिरहने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।
त्यसो त जुन सुकै काम गर्दा पनि अफ्ठ्यारा आउँछन् । बेला बेला ति अफ्ठ्याराहरु यति भयंकर देखिन्छन् कि त्यो आफ्नो क्षमताले समाधान गर्नै नसक्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छन् तर तपाई कुनै न कुनै रुपमा समाधान गर्न सक्ने कुरामा दृढ बन्नु भयो भने उपाय निस्किन्छ । तिनै अफ्ठ्यारा अनुभव बन्छन् र तपाई थप क्षमतावान् बन्नु हुनेछ ।
नियम ३ : तपाईको सिमा तपाई मात्रै हो
तपाईले याद गर्नु भएको छ, तपाईले कुनै योजना बनाउँदा मानिसहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् ? सामान्यतया, मानिसहरु तपाईको योजनाका अफ्ठ्याराहरु सुनाउँछन् । उस्तै परे अनेक जटिलता देखाएर तपाईले गर्न नसक्ने भन्दै हतोत्साहित पनि पार्न सक्छन् । यी कुराहरुको बढि वास्ता गर्ने हो भने योजना सुरु गर्न असम्भव प्राय छ ।
यसैले मानिसहरुले तपाईका बारेमा के सोच्छन् भन्ने कुरामा साह्रै धेरै ध्यान नदिनुस् । मानिसले देख्ने तपाईको क्षमतामा पनि निर्भर नहुनुहोस् । त्यस्तै कसैसँगको प्रतिष्प्रर्धामा पनि धेरै आफ्नो समय र परिश्रम खर्च नगर्नुहोस् । किनकि, ति कुनै पनि कुराले तपाईको क्षमतालाई निर्धारण गर्दैनन् । तपाईको क्षमता र सफलताको सिमा तपाई मात्रै हो । हरेक दिन अघिल्लो दिनको आफु भन्दा बढि अब्बल र सकारात्मक बनाउँनुहोस् । सफलता कदममा पाइन्छ ।
नियम ४ : व्यक्तित्व विकाश गर्नुहोस्
यो बिषयमा धेरै लेख्न आवश्यक छैन । हामी सबैलाई थाहा छ, व्यक्तित्व विकाश गर्नु भनेको महंगो र आडम्बरी सामानहरुको प्रयोग गर्नु मात्रै होइन । बरु बौद्धिकरुपमा प्रखर र लचक हुनु पनि हो । नयाँ कुरा प्रति चासो राख्नुहोस् । सिक्न नछोड्नुहोस् ।
यस्तै नम्र बन्नुहोस् तर चाप्लुसी नगर्नुहोस् । गौरव गर्नुहोस् तर घमण्ड नगर्नुहोस् । खुल्ला विचारको हुनुहोस् तर अराजक नबन्नुहोस् । व्यक्तित्व वजनदार बनाउँनुहोस् ।
नियम ५ : निश्चित उद्देष्य राख्नुहोस्
उद्देष्य के हो भन्ने सँधै प्रस्ट हुनुहोस् । कुन उद्देष्य वा लक्ष्य भन्ने निर्धारण नगरी अगाडी बढ्दा कहाँसम्म पुग्ने र कहाँ गएर अडिने भन्ने पत्तो लगाउँन गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै असाध्यै धेरै उद्देष्यहरु पनि नराख्नुहोस् जसले तपाईलाई कुन समयमा के गर्ने भन्ने निश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ । यसै पनि एक भन्दा बढि डुंगामा खुट्टा राखेर खोला तर्न सम्भव हुन्न ।
नियम ६ : सफलता योजनाबद्ध हुन्छ
सफलता कसैले दानमा दिएर वा कसैको अनुकम्पाले प्राप्त हुने होइन । त्यस्तै अपवाद बाहेकको अवस्थामा सफलता एक्कासी पनि प्राप्त हुदैन । सफलता सँधै योजनाबद्ध र क्रमवद्ध हुन्छ । यसमा विश्वास राख्नुहोस् । आफुलाई सक्षम बनाएर धैर्य हुने हो भने परिश्रमको फल पाइन्छ ।
नियम ७ : उत्पादनशील हुनुहोस्, व्यस्त होइन
कोही मानिस हरेक दिन जति बेलै व्यस्त भइराखेको देख्न पाइन्छ । हुन पनि अहिलेको गतिशिल समयमा सबै मानिस व्यस्त भएको देखिन्छ तर के व्यस्त हुनु सहि हो त ? धेरै जसो अवस्थामा व्यस्त मानिसहरु अव्यवस्थित र भद्रगोल देखिन्छन् । यसैले व्यस्त हुनु मात्रै पनि सहि हुदैन । बरु समयको सहि व्यवस्थापन गरेर आफुलाई उत्पादनशील बनाउँदा सफल हुने बाटो खुल्छ ।
नियम ८ : अनुपयोगी कुराहरु छोड्नुहोस्
कहिलेकाँही सुन्न पाइन्छ, म बोल्छु अनि त्यसलाई सहि बनाउँछु । झट्ट सुन्दा ठिक जस्तो लाग्छ तर कहिलेकाँही बोलेका कुरा गलत पनि हुन सक्छन् । त्यस्तो कुरालाई गलत हो भनेर स्विकार्दा र छोड्दा जीवन सजिलो र बोझ रहित हुन्छ ।
त्यस्तै, कामहरु गर्दा वा योजना बनाउँन कतिपय अनुपयोगी कुराहरुलाई महत्वपुर्ण ठानिएको हुन सक्छ । यस्तोमा अनुपयोगी हुने कुराहरु कम गर्दै जानु पर्छ । यसै पनि गह्रुंगो झोला बोकेर हिड्नु भन्दा कम वजनको झोला बोकेर पहाड चढ्न सजिलो हुन्छ ।
नियम ९ : समय व्यवस्थित गर्नुहोस्
अध्ययनहरुले देखाएको छ कि हरेक दिन आज गर्नु पर्ने काम भनेर सूचि बनाउँने हो भने मानसिक दवाव कम हुन्छ । त्यस्तै समय व्यवस्थित गर्दा प्राथमिकताहरु तय गर्न सजिलो हुन्छ । प्राथमिकतामा प्रमुख कुराहरुलाई कति समय दिने र कम महत्वपुर्ण कुराहरुलाई कति समय छुट्याउँने भन्ने पहिले नै तयार भइन्छ । यसले दैनिकी धपेडीपुर्ण हुनबाट रोक्छ । स्फुर्त अवस्थामा गरिएको कामले सफलता दिलाउँन मुख्य भुमिका खेल्छ ।
तपाईलाई यो लेख कस्तो लाग्यो ? यो लेख पढे पछि लाइक गर्न वा सेयर गरेर फैलाउँन सहयोग गर्नु होला । हाम्रो उज्यालो पाटोको फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम प्रोफाइल वा वेबसाइटमा तपाईले यस्ता थप लेखहरु पाउँन सक्नु हुनेछ । हाम्रो पेज, इन्स्टा र वेबसाइट फलो गर्नुहोला ।
मानिस किन भ्रमण गर्छन् ? भ्रमण गर्ने कति तरिका हुन्छन् ? विश्वमा चर्चित तरिकाहरु
तपाईको योग्यताको कदर नहुनुमा दोष कस्को ? तपाईको कि अरुको ? बुद्धले यसो भनेका छन्
११ कुराहरु जुन उच्च मनोबल वा बलियो मनस्थिति भएका मानिसहरुले कहिलै गर्दैनन्
प्रेममा शर्त किन हुनु हुदैन ? एउटा प्रेरक कथा